SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 41aad safarkii afaraad ee Sindibaad iyo markii nolosha lagu duugay. – Filimside.net
Sheekada waxay noo mareysay markii uu sindibaad dhahay markii aan u imid dadkii jaziirada xeebteeda joogay ayaa waxay I dhaheen anaga waxaan daganahay jaziiradaan mida ku dhagan ee soo bax hadaad rabtid inaad na raacdo sidii ayaana ku raacay.
Markii aan jaziiradii imaaday ayay meel aan dago isiiyeen si fiicana wey ii sharfeen kadibna waxay ii geeyeen boqorkooda si aan qisadeyda uga sheekeeyo, waxaana bilaabay inaan boqorkii uga waramo qisadii isoo qabsatay anigoo kasoo bilaabay maalintaan baqdaad kasoo baxay ilaa iyo maalintaan dadka jaziiradaan dagan kala kulmay.
Boqorkii markii uu qisadeyda maqlay aad ayuu ula yaabay wuxuuna ii sheegay in jaziiradiisa sidaan doono ugu noolaan karo isla markaasna aan u ahay asiga marti sharaf si fiican ayuuna iisoo dhaweeyay.
Kadib waxaan bilaabay inaan jaziiradii ka howl galo waxaana garab siinayay dadkii jaziirada ku noolaa anigoo waxkasta oo aan aqaanay ka caawinaayay maadaama aan aqoon badan lahaa sidoo kalana dal aqoon ahaa wax badan ayay iga faaideysteen.
Boqorkii jaziirada waxaan ka caawin jiray siduu u maareyn lahaa arimaha dowladiisa u gaarka ah oo markii xaajo culus soo wajahdo wuu ii yeeri jiray waxaana ahaa mid ka talo bixiyo ilaa uu boqorkii markii dambe iga jeclaaday isla markaasna uu bilaabay inuu iila dhaqmo sidii wasiir dowladiisa ka tirsan.
Waxyaabaha aan ka caawiyay boqorka iyo dowladiisaba waxaa kamid ahaa sida faraska loogu sameeyo heeryo lagu fuulo waayo waxay fardaha kori jireen iyagoon waxba la iska xijinin oo bilaa koore ah sidoo kalana aanan wax xariga iyo liijaan midna laheyn.
Qofkasta oo faras isticmaalo jaziiradaasna ku noolaa waxaan ka caawiyay sidii uu faraska u fuuli lahaa una hogi lahaa ilaa maalintii dambe uu boqorkii ii wacay wuxuuna igu yiri; waxaad ogaataa inaad agteena ka tahay qof cizzi iyo sharaf leh isla markaasna anaga naga mid ah sidaas owgeed mna doonaayo inaad naga tagto waxaana doonayaa inaan arin ku faro oo aad igu adeecdo iguna caasinin.
Markaas ayaan ku dhahay; maxaad iga dooneysaa boqorow inaan kugu adeeco waayo aniga qowl kuguma soo celin karo maadaama aad abaal weyn ii sameysay.
Markaas ayuu igu dhahay; waxaan rabaa inaan kuu guuriyo gabar anaga naga mid ah gabar qurux iyo hantiba leh waxaanse kaa rabaa inaad anaga nala joogto oo aad toos halkaan usoo dagto isla markaasna aad qasrigaan qeyb ka dagtid waxkale kaama rabo intaas ayaan kaa rabaa ee ha igu khilaafin.
Markii aan hadalka boqorka maqlay ayaan xishood dareemay waana ka xishooday inaan u jawaabo anigoo aamusay, markaas ayuu boqorkii igu yiri; maxaad iigu jawaabi la’dahay wiilkeygiyow?
Markaas ayaan ku dhahay’ boqorkeyga amarka adigaa iska leh waxaad doonto samee.
Markaas ayuu isla waqtigiiba dalbay in la keeno qaadigii iyo marqaatiyaashii asigoo isla waqtigiiba ii guuriyay gabar sharaf iyo maamuus leh nasab sarana ka dhalatay waxayna aheyd gabar aad u qurux badan sidoo kalana hanti fara badan leh.
Markii gabadhii la igu daray ayuu boqorkii isiiyay guri weyn oo waasac ah sidoo kalana wuxuu isiiyay jaariyado iyo khadaamiin ii adeego waxaana bilaabay inaan ku noolaado nolol midii ugu macaaneyd anigoo gabadhii la ii guuriyay ee xaaskeyga aheyd jeclaaday waliba aad u jeclaaday waxaana bilaabay inaan riyo iyo mala awaal dhisto anigoo niyada iska lahaa hadii aan u laabanayo magaaladeydii aan jeclaa ee baqdaad xaaskeyga macaan horay ayaan usii kaxeysan doonaa.
Gabadhii la ii guuriyay waxay ii jeclaatay si aan caadi aheyn oo xad dhaaf ah anigana sidoo kale ayaan u jeclaaday waxaana noqonay labo qofood oo aanan wax shaqo kale qabanin markii laga reebo inaan anaga shaqo iska qabano.
Anigoo noloshaas macaan ee quruxda badan isaga jiro ayaa maalintii dambe waxaa dhimatay nin aan daris aheyn naagtiisa waxaana ugu tagay si aan ugu tacsiyeeyo.
Waxaan u tagay ninkii oo murugta intey ka badatay aadba moodo in geeri loogu bishaareeyay waxaana ku dhahay si aan qalbiga ugu dajiyo; waxba ha murugoonin ilaahay ayaa badal kheyr qabo kuugu badalaayo waxaana rajeynaa in xaaskaaga labaad aad cimri fiican oo barakeysan wada qaadataan.
Markaas ayuu bilaabay ninkii inuu sii ooyo wuxuuna I dhahay; side ayaan gadaasheeda u guursan karaa ama badalkeeda u heli karaa ayadoo nolosheyda oo dhan wax maalin kayar ay iiga dhimantahay?
Markaas ayaan ku dhahay; walaalkey is daji oo sabar naftaadana dhimasho ha u saadinin waayo waad caafimaad qabtaa marka alx dheh.
Markaas ayuu I dhahay; adiga waxba ma ogide orod iska bax waayo aniga bariba waa la idili doonaa.
Markaas ayaan anoo yaaban ku dhahay; sidee ku dhici kartaa sideese adiga ku ogaatay?
Wuxuu iigu jawaabay; manta ayay xaaskeyga duugi doonaan anigana markey duugayaan ayay qabriga ila galin doonaan oo ila duugi doonaan waayo caadooyinka iyo dhaqankeena ayaa waxay tahay in hadii naagta dhimato ninka qabana laga daba duugo hadii ninka dhintana naagta uu qabo ayaa laga daba duugaa waxaana labadoodaba lagu duugaa hal qabri ujeedkana wuxuu yahay si hadii midkood uu dhinto midka kale uusan nolosha ugu sii raaxeysan.
Markaas ayaan yaabay waxaana soo xusuustay inaan qabo oo guursaday naag iyaga kamid ah markaas ayaan isku naxay yaa ilaahii oo hada hadii xaaskeyga dhimato mala iga daba dilaa oo nolosha miyaa la igu duugi doonaa wlhi caadadaan waa mid xun ayaan ku dhahay ninkii dariskeyga ahaa anoo yaaban.
Intii aan hadalka dhameynin ayaa waxaa goobtii yimid dadkii magaalada daganaa waxayna bilaabeen iney ninkii u tacsiyeeyaan maadaama naagtiisa dhimatay sidoo kalana naftiisana uga tacsiyeeyaan maadaama uu asna kadaba dhiman doono anigana yaab ayaan meeshii la taagnahay waxaana bilaabay inaan ka cabsado in naagteyda iga hor dhimato….
La soco qeybta 42aad oo xiiso leh.
Fadlan walal xayaysiimaha webka saran midiiba halmar Click ku sii hadaad awoodid adigoo mahadsan.
Waxaa Aqrisay 1,077